शिक्षण अस्पतालमा मिर्गौला फेर्ने ओली नवौं विरामी, क–कस्ले गर्दैछन् शल्यक्रिया | Pennepal
Home हेडर शिक्षण अस्पतालमा मिर्गौला फेर्ने ओली नवौं विरामी, क–कस्ले गर्दैछन् शल्यक्रिया
काठमाडौं । २०६३ देखि मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न सुरु गरेको त्रिवि शिक्षण अस्पतालको रेकर्ड अनुसार अहिलेसम्म आठ जनाको दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको छ । यो हिसाबमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शिक्षण अस्पतालबाट दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने नवौँ र यति ठूलो उपचार मुलुककै सरकारी अस्पतालमा गर्ने पहिलो अतिविशिष्ट व्यक्ति हुन् ।
सम्भवतः यही कारण महाराजगञ्ज अस्पताल प्रशासन र बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थता सरोबरी नै थियो । ओली मध्यान्ह १२ बजे अस्पताल पुग्ने जानकारी पाएको अस्पताल प्रशासनले त्यसपछि आवश्यक पर्ने सबै तयारी र योजना तय गर्यो ।
सरकारी निवास बालुवाटारमा ओलीले आफू उपचारपछि फर्किएर नआउँदासम्मको सबै तारतम्य मिलाए । बिहान सबेरै औपचारिक–अनौपचारिक बैठकहरु गरे । बालुवाटारमा ओली बैठक र भेटघाटमा व्यवस्त भइरहँदा महाराजगञ्जको धपेडी पनि उस्तै थियो । ओलीका लागि ६०१ नम्बर क्याबिन खाली गरिसकिएको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
प्रत्यारोपणमा शिक्षण अस्पतालको नेफ्रोलोजी विभागकी प्रमुख प्रा.डा. दिव्या सिंह शाहले समन्वय गरेको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
उनी प्रधानमन्त्री ओलीकी निजी चिकित्सक हुन्। प्रत्यारोपणका लागि शल्यचिकित्सकको भूमिकामा शिक्षण अस्पतालको युरोलोजी विभागका विभागीय प्रमुख एवं वरिष्ठ प्रत्यारोपण सर्जन प्रा.डा. उत्तम शर्मा रहनेछन्। युरोलोजी विभागका पूर्वविभागीय प्रमुख एवं वरिष्ठ प्रत्यारोपण सर्जन प्रा.डा प्रेमराज ज्ञवाली पनि संलग्न छन्।
सल्यक्रियामा नेफ्रोलोजी विभागका डा. महेश सिग्देल, डा. मुकुन्द काफ्ले र डा.पवन चालिसे, डा. सुमन चापागाईं, डा. सुजित पौडेल, डा. महेश प्रधानलगायतका चिकित्सक संलग्न हुने अस्पतालले जनाएको छ। प्रत्यारोपण सफल भएपछि मिर्गौला दाता संग्रौला तीनरचार दिनमा डिस्चार्ज हुन सक्नेछिन्।
प्रत्यारोपणपछि प्रधानमन्त्री ओली भने एक साता आराम गर्नुपर्ने हुन सक्छ। ‘दुवै जनालाई डिस्चार्जका लागि एक साता लाग्न सक्छ’, डा. खड्गाले भने। तर, प्रत्यारोपणमा संलग्न एक चिकित्सकका अनुसार ७ देखि १० दिनभित्र डिस्चार्ज गर्ने योजना छ। प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेक डा. अनन्त कुमार पनि प्रत्यारोपणका क्रममा सामेल हुने छन्। ‘डा. अनन्त कुमारलाई ब्याक सपोर्टका लागि बोलाइएको हो। प्रत्यारोपण नेपाली चिकित्सकबाटै हुनेछ’, प्रत्यारोपणमा संलग्न एक चिकित्सकले भने।
डा. अनन्त दिल्लीस्थित म्याक्स अस्पतालको मिर्गौला प्रत्यारोपण विभागमा निर्देशक छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले मिर्गौला प्रत्यारोपण अपोलो अस्पतालमा गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलोपटक २०६४ मा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो। उनलाई बुहारी नाता पर्ने अञ्जना घिमिरेले मिर्गौला दिएकी थिइन्।